လော်ရာတောရက်စ်နေရာချထားမှုပုံရိပ် | | ခွေးများ, ရောဂါများ
ခွေးပေါက်စတစ်ကောင်ယူလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အကာအကွယ်ယူထားရမယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လုံလောက်သောအာဟာရမရရှိနိုင်သည့်စွန့်ပစ်ထားသောခွေးကလေးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထပ်ဖြည့်ပါကမည်သည့်အခြေအနေမဆိုပိုဆိုးလာသည်။ သင်၏ခွေးကလေးသည်အားနည်းနေသည်၊ မစားလို၊ မကစားလို၊ အော့အန်လည်းဖြစ်စေဝမ်းလျှောနေသည်ကိုသင်တွေ့ရပေမည်။
အကယ်၍ ဤကိစ္စတွင်သင်သည် c နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိသည်၎င်းကိုမည်သို့ကျွေးမွေးရမည်၊ ထိုတွင်မည်သည့်အရာလိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်နေမကောင်းလျှင်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ နောက်၊ ဒီ post မှာဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိအောင်သင်အနည်းငယ်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
1 ကျွန်ုပ်၏ cahorro နှင့်သူ၏ကိုယ်ခံအားစနစ်
3.2 Distemper သို့မဟုတ် distemper
ကျွန်ုပ်၏ cahorro နှင့်သူ၏ကိုယ်ခံအားစနစ်
ခွေးငယ်များသည်အသက်တာ၏ပထမအပတ်များအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသောခွေးတစ်ကောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်သည်မလှုပ်ရှားပါ။ အမှန်မှာ၊ ဤအချိန်အတောအတွင်းမိခင်မှရရှိသောကိုယ်ခံစွမ်းအားကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုတုန့်ပြန်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အထူးသဖြင့် colostrum တွင်အများဆုံးပါဝင်သော colostrum တွင်မိခင်ကသူမအားနို့မှတဆင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားခုခံကာကွယ်မှုများကိုလွှဲပြောင်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ခွေးပေါက်စကိုမိခင်နို့စို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူ့အားပထမ ၄၅ ရက်တာမိခင်နို့တိုက်ကျွေးရန်သင့်လျော်သည်။
ဒီတော့ဒါကတခြားအချက်တွေနဲ့အတူ \_ t ခွေးများသည်ကူးစက်ရောဂါများနှင့်ကပ်ပါးကောင်များကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများအတွက်အလွန်အမင်းကျရောက်လေ့ရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အစီအစဉ်သည်အသက် ၆ ပတ်ခန့်တွင်စတင်သည်။ သို့သော်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ကိုသေချာစွာလိုက်နာပြီးနောက်၌ပင်ခွေးကလေးသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပodိပစ္စည်းများကိုမထုတ်လုပ်နိုင်မီမိခင်ထံမှအမွေရရှိသောကာကွယ်မှုများလျော့နည်းသွားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေအနည်းငယ်ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဤအချိန်တွင်သူတို့သည် parvovirus ကဲ့သို့သောရောဂါအချို့ကိုဖမ်းမိနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်များသည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်
အစားအစာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကလေးသည်ကြီးလာမည်သို့မဟုတ်အားနည်းသည်ဟုထင်ရနိုင်သည်။ အစားအစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကလေးအားသင့်လျော်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံမဏ္pillိုင်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့, ခွေးပေါက်စအဆင့်တွင်အာဟာရလိုအပ်ချက်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်မြင့်မားသည်.
ခွေးပေါက်စအဆင့်မှာခွေးကြီးကြီးသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ခွေးဖြစ်ရင်ကွဲပြားတယ်။ သေးငယ်သောဖောက်ခွေးများသည်ကြီးမားသောမျိုးပွားခွေးပေါက်စများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကယ်လစီယမ်ဓာတ်နှင့်ပိုမိုစွမ်းအင်ပြည့်ဝသောအစာကိုပေးရမည်။ ကြီးထွားမှုပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသောဖောက်လုပ်ထားသောခွေးပေါက်စများကိုကယ်လစီယမ်နည်းသင့်သည်။
အကယ်၍ အစာသည်အလွန်နိမ့်သောအဆင့်သို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်ပမာဏအနည်းငယ်သာပေးလျှင်၎င်းတို့သည်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည် သွေးအားနည်းရောဂါဒါပေမယ့်လည်းအဝလွန်ခြင်းအဘို့အသတိထားပါ။ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်သောအစားအစာကိုရှာဖွေပြီးထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်သင့်လျော်သည်။
သင်၏ခွေးကလေးသည်အားနည်းပြီးသူအော့အန်နေသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါကအော့အန်သည်မည်သို့ကြည့်မည်ကိုသင်သတိပြုသင့်သည်။ ဒါဟာ VET မှခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါဒါဟာအတော်လေးအရေးကြီးသောနှင့်ကြီးစွာသောအကူအညီ၏။ သူသည်၎င်းနှင့်အတူမည်သည့်အရာသို့မဟုတ်မည်သည့်အစာကိုမဆိုအန်ထုတ်လိုက်လျှင်အန်ဖတ်၏အရောင်ကိုကြည့်ပါ။
ရှင်းလင်းဖို့နောက်ထပ်အရာဖြစ်၏ regurgitating အန်ကဲ့သို့တူညီသည်မဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်ခွေးကလေးသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာစားပြီး၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသဖြင့်မျိုချလိုက်သဖြင့်အစားအစာကိုထုတ်ပစ်လိုက်သောအခါဥပမာတစ်ခုဖြင့်ခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။ ပြန်လာပြီ။ ခွေးကလေးနှင်ထုတ်လိုက်သောအရာသည်သည်းခြေနှင့်အတူလိုက်ပါလာပြီးစားလိုက်သောအရာ၏ပုံသဏ္soာန်ကိုလွန်စွာတန်ဖိုးမထားတော့သောအခါ၎င်းသည်အစာကြေလာပြီး၊ တက်ပစ်.
palliative အတိုင်းအတာအဖြစ်, ရေအန်ပြီးနောက်2နာရီထုတ်ယူရပါမည်။ ဒီ ၂ နာရီအကြာမှာမင်းကိုရေနည်းနည်းလောက်ပေးလိမ့်မယ်။ ငါဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာငါမြင်လိမ့်မယ်၊
ခွေးတစ်ကောင်ကိုအော့အန်ခြင်းသည်အစားအသောက်ဓာတ်မတည့်မှု၊ သူစားသောအရာသို့မဟုတ်ပါဗိုဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ခွေးကလေးသည်အစာမစားလို ၍လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤရောဂါလက္ခဏာများသည်မည်သည့်ရောဂါမျိုးမဆိုယေဘူယျအားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်းခွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ၄ င်းတို့သည်ခုခံအားကျဆင်းမှုပိုများသည်။ parvovirus သို့မဟုတ် distemper ခံစားနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Parvovirus နှင့် distemper (သို့) distemper သည်ခွေးတစ်ကောင်မှခံစားရနိုင်သောကူးစက်ရောဂါအများဆုံးရောဂါများဖြစ်သည်။
La parvovirus o Parvovirus သည်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ခွေးပေါက်စများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤရောဂါသည်အဓိကအားဖြင့်အစာခြေစနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများမှာ -
အမြှုပ်ကဲ့သို့အန်ခြင်း၊ အနည်ချည်းကဲ့သို့အန်ခြင်း၊ ရောဂါ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူသွေးထွက်သံယိုဖြစ်လာသည်။
Distemper သို့မဟုတ် distemper
El ကွမ်းခြံကုန်း အောက်ပါစနစ်များကိုသက်ရောက်သည်: အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ, တုံး, အစာခြေ, urogenital နှင့်အာရုံကြော။ ရောဂါလက္ခဏာများသည်၎င်းတို့သက်ရောက်သည့်စနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်မှစတင်သည်။ ဤတွင်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများအနက်ရောဂါ၏ပထမအဆင့်တွင်တွေ့ရသောရောဂါများမှာရောဂါဖြစ်သည် အဖျား၊ နှာရည်နှေးခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်နှင့်အားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်. parvovirus ကဲ့သို့သူတို့သည်အလွန်လျင်မြန်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများဖြစ်သည်.
parvovirus နှင့် distemper အပြင်, ကပ်ပါးရောဂါများသည်ခွေးပေါက်စများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသောရောဂါဗေဒတစ်ခုဖြစ်သည်.
အများဆုံးမကြာခဏကထုတ်လုပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ် toxacara canisလူကြိုက်များသောခွေးတွင် "worms" ရှိသည်ဟုလူသိများသော toxocariosis ၏ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ဤလက္ခဏာများသည်ခွေးငယ်လေးချောင်းဆိုးမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ် toxacara canis ဒါ့အပြင်လူ့မျိုးစိတ်ကူးစက်။ ထိုကွောငျ့, ခွေးများကိုအခါအားလျော်စွာမုန်းတီးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, များသောအားဖြင့်အသက်တာ၏ပထမသုံးလတာကာလအတွင်းနှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်နှင့်နောက်ဆုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက် ၂၀ အတွင်းအမေလည်းဖြစ်သည်။ ၃ လကြာပြီးနောက် ၃ လတစ်ကြိမ်ဆီးနှံခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
အပြင် toxacara canisအခြားအူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးကောင်များလည်းရှိသည် Toxocaris leonina, Trichuris vulpis၊ ခွေးပေါက်စများတွင် ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်တုပ်ကွေးပိုးနှင့် protozoa ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြီးမားပြီးကြာရှည်ကျခြင်းဖြစ်လျှင်သင်၏ခွေးကလေးသည်အားနည်းနေနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကူးစက်မှုသည်အခြားရောဂါဗေဒများသို့ယိမ်းယိုင်သွားနိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်သည်သင်တို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ခွေးပေါက်စများတွင်အော့အန်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းအတွက်သင်အမြန်သွားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့သည်သင်၏ခွေးကလေးအားအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ငါ့ခွေးကလေးကအားနည်းနေ